Izinzuzo Zezingxenye Zokunyathela Njengoba ukucindezelwa komshini kuvame ukwenziwa ekamelweni lokushisa, kubizwa nangokuthi ukubanda okubandayo. Ukunyathela ukwenziwa kungenye yezindlela zokucubungula insimbi. Kuyinto yokwakha ubuchwepheshe bokwakha obususelwa kumqondo wensimbi we-plastic deformation. Izinto zokusetshenziswa zokunyathela ukucubungula ngokuvamile ziyishidi noma umucu, ngakho-ke ibizwa nangokuthi isitembu sensimbi. (1) Ukunemba ntathu izingxenye nginyathela kuqinisekisiwe isikhunta, futhi has efanayo ...
Njengoba ehamba phambili plastic umjovo isikhunta China umenzi, thina ngokukhethekile ekwenzeni ahlukahlukene plastic umjovo isikhunta for yezimoto, izinto zasendlini, imishini yezokwelapha, electronics kanye nemishini yezemidlalo, kanye jikelele izicelo OEM zezimboni. Inkampani yethu ihlanganisa indawo engaphezu kuka-3 800 square metres workshop, ezungezwe ukuthutha okulula. Njengamanje, iqembu lethu lifinyelela kwabenzi bamathuluzi abahle abangaphezu kuka-150 eChina nasezimpahla ezinkulu ukuze kube ngaphezu kwezigidi eziyi-15 ze-RMB. Amandla ethu ...
Ukulingiswa kwe-die Kuyini ukuphonsa die? Ingcindezi thusi ibizwa die die thusi Die-thusi indlela lapho oketshezi oncibilikisiwe ingxube ithelwa egumbini ingcindezi, umgodi isikhunta sensimbi ugcwele ngejubane elikhulu, futhi ingxubevange ketshezi kuqiniswe ngaphansi kwengcindezi ukwakha ekubunjweni. Ubuhle nobubi bokuphonswa kokufa: Inzuzo: ukusebenza kahle kwekhwalithi ephezulu yokukhiqiza intengo enhle Ukungalungi: izinto ezikhawulelwe kuphela i-aluminium zinc magnesium lead lead tin ingasetshenziselwa ukusakaza kuze kube manje. Expe ...
Imiklamo eyenziwe ngezifiso iyamukelwa. Ama-oda we-OEM / ODM amukelekile. Singabantu bezinhlobonhlobo zokukhiqizwa ngokusho kwesibonelo noma amakhophi wamakhasimende ethu. Sicela uxhumane nathi ngokukhululekile njengomngani omuhle uma unentshisekelo kumikhiqizo yethu kanye nensizakalo. Amasiko ngokunemba okuphezulu die casting izingxenye Isikhunta silungiselela nokwenza Uhlobo olulodwa umgodi / umuthi-umgodi wezingxenye ezifanayo / umgodi womndeni u-2-3 ubuyisele isikhunta sokushintshanisa izinto SKD61, H13, Dievar, QDN, 8407, 2234V, TQ1, 2343, 45 # Steel , njll ubukhulu besivumelwano ...
Umshini Omncane we-CNC Lathe Machine Turning Drawing High Precision Spare Parts Igama lomkhiqizo , ukuqhuma kwesihlabathi, ukupholisha isibuko, njll Isitifiketi se-ISO9001, i-SGS, i-TS16949, i-ROHS Process turning, ukugaya, ukubhola, ukugaya, ukupholisha njalonjalo; Ububanzi bebhizinisi i-CNC machining, isakaza, yona ...
Precision CNC machining izingxenye zensimbi engagqwali Imininingwane: Igama lomkhiqizo: I-Dongguan Custom Precision Stainless Steel Metal CNC Turning Parts Material: insimbi engagqwali, i-aluminium, ithusi, insimbi, ithusi, ipulasitiki, njll. Ukwelashwa Kwendawo: -ukupholisha, njll Isitifiketi: ISO9001, SGS, TS16949 Inqubo: ukujika, ukugaya, ukubhola, ukugaya, ukupholisha nokunye; Ububanzi bebhizinisi: i-CNC machining, i-plastic prototyping, i-plastic molding Delivery: izinsuku eziyi-7-15 ngemuva ...
Izingxenye zemishini ye-CNC zivamise ukusetshenziselwa amaphrojekthi adinga ukususwa okukodwa kumakhulu ezingxenye eziningi. Kusuka kupulasitiki kuye ensimbi, kusuka ebuningini obuphansi kuya ezidingweni zokukhiqiza ngobuningi noma njengokuxhumeka okukodwa kokuvala phakathi komklamo womqondo nokukhiqizwa okugcwele, kanye ne-oda elilodwa langaphambi kokukhiqizwa ngobuningi besiko Isici se-Carbon steel, ingxubevange yensimbi, ithusi, insimbi engagqwali, njll. . Usayizi M2-M36.Customized ngokusho umdwebo wakho. Izinsizakalo ze-OEM, idizayini, ukwelashwa okungaphezulu okwenziwe ngokwezifiso kwe-Passivation ...
Izingxenye zemishini ye-EDM Inqubo ye-EDM eyisisekelo ilula kakhulu okuyi-spark kagesi eyakhiwe phakathi kwenhlansi ye-electrode nganoma iyiphi into ehambisa ugesi, imvamisa isebenza kwamanye amaphuzu ayisihluthulelo, isikhunta sepulasitiki, indawo yangaphansi nendawo encane, njll. ikhono lezinto zokusebenzela lifinyelela kumasentimitha angu-16 ubukhulu, futhi ama-taper angles afinyelela kuma-degree angama-30 +, Singakwazi ukusingatha izingxenye ezifika ku-25.6 "x 16" x 17.75 pi zomsebenzi. Intambo yethu enhle yokusika ingaveza ubujamo beqiniso namakhona kuze kube .001 ”wi ...
Izingxenye Zokuguqula ze-CNC: Izinsimbi zethu ze-CNC zinika amandla ijubane eliphezulu nokuguquka kwekhwalithi ephezulu kweplastiki nezinsimbi. Inqubo yokuphenduka ivumela ama-geometri angaphandle ayinkimbinkimbi namabhali angaphakathi ukuthi akhiqizwe. Umthamo wethu wokuphenduka utholakala kokukodwa ngokusebenzisa ukukhiqizwa kweqoqo lezinto zakho. Futhi vula-milling kwakwakhiwa umshini nge ithuluzi umbhoshongo nge kahle ephakeme. Inzuzo yomshini wokujika (1) Nciphisa inqubo yokukhiqiza yomkhiqizo futhi uthuthukise ukusebenza kahle kokukhiqiza. Tur ...
Kungani usikhetha: 1.Siyifektri enesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-20 cnc machining. I-2.Approx 95% yomkhiqizo wethu ithunyelwa ngqo e-USA / Canada / Australia / UK / France / Germany / Bulgaria / Poland / Italia / Netherlands… Ikhwalithi iqinisekisiwe. Imishini yethu eminingi ithengwa e-USA naseJapan njengamakhompiyutha we-brand HAAS (3-axis, 4-asxis cnc milling machines), Mfowethu, TSUGAMI (6-axis turning machine), Miyano njalonjalo. ngakho-ke siyakwazi ukwenza izingxenye eziphezulu ngokunemba ngokuya ngezidingo zakho zokubekezelelana. 4 ....